Dhageyso: Hiiraan iyo Hooska Shareecada Warbixinno taxana ah [Xalqada 5aad].
Thursday August 13, 2020 - 17:09:39 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Idaacada Islaamiga ah ee Al-andalus ayaa booqasho qaadatay muddo Labo bil ah ku tagtay degmooyinka iyo deegaanada Raayada Towxiidka ay ka babaneyso ee Wilaayada Islaamiga Hiiraan ee dhacda bartamaha dalka Somalia.
Andalus ayaa u kuura gashay hormarka ballaaran ee ay ku tilaabsatay Wilaayada Islaamiga ah ee Hiiraan sida dhanka Amniga, Qadaha, Waxbarashada, Ganacsiga iyo guud ahaan adeegyada bulshada ee ka jirta degmooyinka iyo deegaanada Wilaayada ee Raayada Towxiidka ay ka babaneyso.
Inka badan Toban warbixin ayey Idaacaddu ka diyaarisay safarkii ballaarnaa ee ay ku tagtay WI Hiiraan kuwaasi oo ay Andalus si toos ah u bilowday baahintooda.
Halkan Ka Dhageyso Xalqadda 5-aad Ee Hiiraan Iyo Hooska Shareecada.
Dhageyso: Hiiraan iyo Hooska Shareecada Warbixinno taxana ah [Xalqada 14aad] dhammaad.
Dhageyso: Hiiraan iyo Hooska Shareecada Warbixinno taxana ah [Xalqada 13aad].
Dhageyso: Hiiraan iyo Hooska Shareecada Warbixinno taxana ah [Xalqada 12aad].
Dhageyso: Hiiraan iyo Hooska Shareecada Warbixinno taxana ah [Xalqada 11aad].
Dhageyso: Hiiraan iyo Hooska Shareecada Warbixinno taxana ah [Xalqada 10aad].
Dhageyso: Hiiraan iyo Hooska Shareecada Warbixinno taxana ah [Xalqada 9aad].
Dhageyso: Beelo walaala ah oo diyo ku kala qaatay degmada Salagle.
Dhageyso: Sheekh Abuu Muscab oo ka hadlay Weerarkii Elite Hotel, Goofgaduud iyo Arrimo kale.